Mas'uulka maaliyadeed, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Wakiilka maaliyadeed ee masiixiga waxaa loola jeedaa ula macaamilka ilaha shaqsiyeed qaab ka tarjumeysa jacaylka Ilaah iyo deeqsinimada. Tan waxaa ku jira waajibka ah inay ku tabarucaan qayb ka mid ah lacagaha shaqsiyadeed shaqooyinka Kaniisadda. Hawsha Ilaahay ee kaniisadda uu Ilaahay siiyay waa inay ku tabarucdo wacdinta injiilka iyo daaqista adhiga. Bixinta iyo bixinta waxay muujineysaa xushmad, iimaan, addeecid iyo jacaylka rumaystaha ee Ilaah, oo ah isha badbaadada iyo bixiyaha wax kasta oo wanaagsan. (1 Butros 4,10:1; 9,1 Korintos 14: 2-9,6; 11 Korintos)
Waraaqdii labaad ee Bawlos uu u qoray Korintos, wuxuu ku bixiyay xisaab aad u wanaagsan oo ku saabsan sida hadiyadda farxadda leh ee farxaddu u saameyso nolosha rumaystayaasha hab wax ku ool ah. "Laakiin waxaan idinku wargalinaynaa, walaalayaalow gacaliyeyow, nimcada Ilaah ee lagu siiyey bulshooyinka Makedoniya" (2 Korintos 8,1).
Bawlos kaliya ma uusan sameynin warbixin yar - laakiin wuxuu rabay walaalaha Korintos inay ka jawaabaan nimcada Ilaah si la mid ah kaniisada Tesaloniika. Wuxuu doonayay inuu iyaga siiyo jawaab sax ah oo miro dhal ah oo deeqsinimada Eebbe.
Bawlos wuxuu xusayaa in reer Makedoniya ay “aad u dhibaataysan yihiin” iyo “aad u liitaa” - laakiin sidoo kale waxay leeyihiin “farxad aad u wanaagsan” (V. 2). Farxaddeeda kama imaan xagga injiilka caafimaadka iyo barwaaqada. Farxadooda weyn kama imaanin lacag iyo alaab fara badan, laakiin in kasta oo ay haysteen in yar oo ay lahaayeen!
Falcelinteedu waxay muujineysaa wax "ka yimid adduunka kale", wax ka sarreeya, wax gabi ahaanba ka baxsan dunida dabiiciga ah ee aadanaha, waana wax aan lagu sharixi karin qiimayaasha adduunkan: "Sababtoo ah farxaddeeda waxay ahayd mid farxad leh markii ay isku muujisay dhibaato badan. iyo, in kasta oo ay aad u liitaan, hadana wax badan bay ku bixiyeen fudud kasta » (V. 2).
Waa wax lala yaabo! Isku dar saboolnimada iyo farxadda maxaad helaysaa? Bixin badan! Tani maahan boqolkiiba-siinteeda. "Sababtoo ah sida ugu adag ee aan u markhaati kici karo, waxayna xitaa raalli ka noqdeen awooddooda" (V. 3). Waxay siiyeen wax ka badan wixii "macquul ahaa". Waxay bixiyeen allabari.
Hagaag, sidii haddii taasi aysan ku filnayn, "waxaan weydiisannay qancin badan si ay uga caawin karaan barakada iyo wadajirka u adeegida quduusiinta." (V. 4). Saboolnimadooda darteed, waxay weyddiiseen Paul fursad uu ku siiyo wax ka badan inta macquulka ah!
Hadana Bawlos wuu ogyahay in waxkasta oo qof bixiyo, waxba uma taraynayso qofka hadii dabeecaddu ka xanaaqdo halkii deeqsinimo (1 Korintos 13,3). Marka ma doonayo inuu cabsi geliyo dadka reer Korintos, si uu uga xanaajiyo, laakiin wuxuu doonayaa inuu cadaadis yar dul saaro iyaga maxaa yeelay habdhaqanka reer Korintoon waxa uu ku dhacay filashooyin waa in loo sheegaa in tani ay ahayd kiiska. «Uma odhan taas amar ahaan; Laakiin sababta oo ah kuwa kale ayaa aad u xiiseeya, waxaan sidoo kale baadhayaa jacaylkaaga si aan u arko bal inuu yahay kan saxda ah
noqon » (2 Korintos 8,8).
Waqti xaadirkaan, dadka aaminka ah ee Ilaah waxay soo mareen tijaabooyin, xitaa saboolnimo - laakiin, maxaa yeelay Ciise wuxuu inagu dhex nool yahay, waxaan hodan ku noqon karnaa deeqsinimada. Waxaan ku guuleysan karnaa wax bixinta. Waan awoodnaa
waxyar ka dhaaf inta ugu yar maxaa yeelay hadda xitaa farxaddayada Masiixa ayaa buuxsami karta si loo caawiyo kuwa kale.
Sida Bawlos u adeegsaday tusaalaha Makedoniyaanka si uu u dhiirrigeliyo dadka reer Korintos inay deeqsinimada siiyaan, wuxuu mar hore u adeegsaday dadka Korintos inay dhiirrigeliyaan dadka reer Makedoniya, sida muuqata guul weyn buu ku gaadhay. Dadka reer Makedoniya waxay ahaayeen kuwo deeqsi ah oo Bawlos gartay in kuwa reer Korintoonku ay qaban karaan wax badan intii ay hore u qaban jireen. Laakiin wuxuu Makedoniya ku faaniyey in dadka reer Korintos ay deeqsi yihiin. Hadda wuxuu rabay in kuwa reer Korintos ay dhammaystiraan. Wuxuu rabaa inuu mar kale digo. Wuxuu doonayaa inuu cadaadis saarto qaar, laakiin wuxuu doonayaa in dhibbanaha si ikhtiyaari ah loo siiyo.
Laakiin waxaan u diray walaalaha si aan amaanteennu idiinku burburin qormadan, oo aad diyaar ugu ahaataan sidaan idiin sheegay, in hadday Makedoniya iga yimaaddaan oo ay ku arkaan iyagoo aan diyaar ahayn, Maaha in la yiraahdo: waxaad ku ceeboobi doontaa kalsoonidan. Marka waxaan hadda u arkaa inay lagama maarmaan tahay in aan ugu waano qaado walaalaha in ay horay ugu socdaan diyaarinta barakada aad shaacisay si ay diyaar ugu tahay hadiyad barakeysan ee aan khaldanayn » (Aayadaha 3aad).
Markaas waxaa jira aayad aan marar badan maqalnay. Qof walba, sida uu maanka ku hayo, ma aha qasab ama khasab; maxaa yeelay, Ilaah wuxuu jecel yahay deeq bixiye » (V. 7). Farxaddaas micnaheedu maahan farxad ama qosol - micnaheedu waa inaan ku raaxeysano la wadaagista alaabadayada kuwa kale maxaa yeelay Masiixu waa inagu jiraa. Bixinta waxay naga dhigeysaa inaan fiicno.
Jacaylka iyo nimcadu waxay ka shaqeeyaan qalbiyadeenna si noloshu wax siiso si tartiib tartiib ah ayey farxad noogu noqonaysaa.
Saaxiibbada, iimaanku nolol fudud ma aha. Axdiga cusubi nama ballanqaado nolol raaxo leh. Waxay bixisaa ugu badnaan hal milyan. Faa'iidooyin maalgashiyadeena - laakiin waxaa ka mid noqon kara qaar ka mid ah dhibanayaal muhiim ah noloshan ku meel gaarka ah.
Bawlos wuxuu xasuusinayaa dadka reer Korintos in deeqsinimadooda aysan ahayn kaliya dadaal bina-aadamnimo - waxay leedahay natiijooyin fiqi ahaaneed. Dadku Ilaah bay ugu mahadnaqayaan tan maxaa yeelay waxay fahmeen in Eebbe ku dhex shaqeeyo dadka. Eebbe wuxuu saaraa kuwa wax siiya qalbigooda. Sidan ayaa loo sameeyaa shaqada Ilaah.
«Adeeggan aaminka ah waxay Ilaah ku ammaaneen addeecidkiinna xagga qirashada injiilka Masiix iyo fudaydinta wada-noolaanshaha iyaga iyo qof kastaaba» (V. 13). Dhowr qodob ayaa caan ku ah markan. Marka hore, Korintos waa ay awoodeen inay isku caddeeyaan wax qabadkooda. Waxay ku muujiyeen ficilladooda in aaminsanaantooda ay dhab tahay. Marka labaad, deeqsinimadu ma keento oo keliya mahad-naq, laakiin sidoo kale waxaynu ku mahadnaqaa Ilaah. Waa hab lagu caabudo. Saddexaad, aqbalaadda injiilka nimcada waxay sidoo kale u baahan tahay addeecid, iyo in adeeciddu ay ku lug leedahay wadaagida ilaha jirka.